ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရရှိငွေ မှတ်တမ်း (ကျပ် ၄၂၆၁၈၀၀ – ၈-၇-၂၀၁၂ ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Community & Society » ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရရှိငွေ မှတ်တမ်း (ကျပ် ၄၂၆၁၈၀၀ – ၈-၇-၂၀၁၂ )	160
ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရရှိငွေ မှတ်တမ်း (ကျပ် ၄၂၆၁၈၀၀ – ၈-၇-၂၀၁၂ )
Posted by ကထူးဆန်း on Jun 13, 2012 in Community & Society, Events/Fundraise, Mandalay Gazette | 160 comments
အလှုငွေ ထည့်ဝင်သူများခင်ဗျား ။ နံမည် စာလုံးပေါင်း မှားယွင်းခြင်း ၊ ထည့်ဝင်သော ငွေ တန်ဖိုးမှားယွင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်လိုသော အကြောင်းများရှိပါက အားမနာတန်းပြန်ပြောစေလိုပါသည် . ပြန်လည် ပြင်ပေးပါမည်.။ 11-6-2011 တွင် စတင်ကောက်ခံရရှိငွေ
၁။ ကိုဝင်း မိသားစု .. ၁၅၀၀၀ ကျပ် (တစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)
့ 12.6.2011 ..
၂။ ကိုလွင်အောင် … ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၃။ ဒေါ် Aye .KK .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၄။ ကိုကြောင်လေး .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
နေ့လည် တစ်နာရီ အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ မအိ …. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၆။ ကိုမြင့်စိုးလတ် … ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
ညနေ ၆း၁၅ နာရီ အထိဖြစ်ပါသည်။
၇။ ကိုထွန်းလင်း .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် ငါးသောင်း) (ကိုရွာစားကျော် နေပြည်တော်)
၈။ ဦးဦးပါလေရာ .. ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း)
၉။ ထူးဆန်း .. ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း)
ညနေ ၇း၁၁ နာရီထိ ။
၁၀။ မရွှေကြည် နှင့် မနှင်းနှင်း … ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
ည ၉း၃၅ နာရီ
၁၁။ ကိုရဲရင့်လှိုင် .. ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်တစ်သိန်း)
၁၂။ မမေဖလားဝါး .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၁၃။ မကြည်ဆောင်း .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၁၄။ မန္တလာသူ .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)
၁၅။ TTNUနှင့်သားကိုဆန်နီ .. ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်နှစ်သောင်း)
၁၆။ POOCH(နန်းမတော်မယ်ပု).. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)
ည ၉း၄၅ နာရီ
၁၇။ ကိုစည်သူထွန်း ( အင်္ဂလန်) .. ၁၂၆၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်းနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်)
၁၈။ ကိုမိုးနှင့် မိသားစု .. ၁၂၇၅၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း နှစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင့် ငါးရာကျပ်)
၁၆-၆-၂၀၁၂ ၁၉။ ဦး Foreign Resident .. ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသိန်း)
၂၀။ မဆူး .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၂၁။ မဝေေ၀ .. ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း )
၂၂။Nature – ၁၀၀၀၀၀.ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၂၃။မပဒုမ္မာ ၁၀၀၀၀၀.ကျပ် (ကျပ်တစ်သိန်း)
၂၄။ဒေါ်စန်းစန်းနိုင် ၁၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၂၅။ဒေါ်စန်းစန်းဦး ၅၀၀၀.ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၂၆။ဒေါ်မိုးမိုးအေး – ၂၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
၂၇။ဒေါ်ရွှေစင်မောင်မောင် ၅၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၂၈။ဒေါ်မိမိတင် ၅၀၀၀. ကျပ် ( ကျပ် ငါးထောင်)
၂၉။ဦးစန်းဦး ၁၅၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းငါးထောင်)
၃၀။ဒေါ်လဲ့လဲံအောင် ၁၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၃၁။ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ၁၀၀၀၀. ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၃၂။ကိုရွှေမင်းသား ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သုံးသောင်း )
၃၃။ ကိုခင်ခ ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)
၃၄။ မမိုချို ၁၉၆၈၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်းကိုးသောင်း ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာ)
ကိုဘုန်းမိုဝင်း S$ 100
ကိုဟန်ဇော်မင်း S$ 100
ကိုခင်ဇော် S$ 50
ဒေါ်မြရီ S$ 50
ပေါင်း S$300 x 656 kyat = 196800 kyat)
၃၅။ ကိုရွှေတိုက်စိုး ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
ညနေ ၉း၁၁ နာရီ ထိ
၃၆ ။ ကိုနိုဇိုမီ …. ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၃၇ ။ ကိုရွာစားကျော် … ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
ညနေ ၄း၅၂ နာရီ
၃၈။ ကိုအန်ကယ်ကြီး၁၉၇၄ …. ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
ည ၉း၀၅ နာရီ
၃၉။ ကိုပေ၊မဒမ်ပေနှင့် မိဘများ.. ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၄၀။ မိနှင်းလေး .. ၁၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်းငါးထောင်)
၄၁။ မာမာငြိမ်း(စာဖတ်သူ) .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၄၂။ မ၀င်းနု (စာဖတ်သူ) .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၄၃။ ပေစိ .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၄၄။ ကိုတညင်သား .. ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၄၅။ ကိုကျော်သိန်းမြင့်၂၃… . ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၄၆။ စာဖတ်သူတဦ .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၄၇။ ကိုကြောင်ဝတုတ် .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
ည ၉း၁၅ နာရီ
၄၈။ မမြတ်သူဇာ(စာဖတ်သူတဦး) … ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
ည ၆း၄၅ နာရီ
၄၉။ မရွှေအိ … ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
(၂၃-၆-၂၀၁၂ထိ) စုစုပေါင်း ကောက်ခံရရှိငွေ …. ၂၇၁၀၃၀၀ ကျပ် ( ကျပ် နှစ်ဆယ့်ခုနှစ်သိန်းတစ်သောင်း သုံးရာကျပ် )
၅၀။ ထုံးဘဲဥ … ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်နှစ်သောင်း)
၅၁။ ဖရဲမ … ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်တစ်သောင်း)
၅၂။ ကိုစွယ်တော်ရွက် … ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၅၃။ ကိုကြီးမိုက် … ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၅၄။ကိုကျင့်ဟူ+မမြင့်မြင့်ဝင်း … ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၅၅။မစန်းစန်းဦး … ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၅၆။ဒေါ်မွှေးးမွှေး … ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၅၇။မသဲနုအေး … ၇၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ခုနှစ်သောင်း)
၅၈။M လုလင် … ၁၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းငါးထောင်)
၅၉။ချာတူးလန် … ၁၂၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းနှစ်ထောင်)
၆၀။မွန်မလေး … ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင် )
၆၁။ကိုရှမ်း … ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၆၂။ မကြည်ကြည်ရှိန် … ၃၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးထောင်)
၆၃။ဒေါ်လှလှသန်း … ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၂၄-၆-၂၀၁၂ နေ့တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၄၁၀၀၀၀ (ကျပ် လေးသိန်း တစ်သောင်းတိတိ)
၂၄-၆-၂၀၁၂ ထိ စုစုပေါင်းကောက်ခံရရှိငွေ..၃၁၂၀၃၀၀ ကျပ် ( ကျပ် သုံးဆယ့်တစ်သိန်း နှစ်သောင်း သုံးရာကျပ်)
၆၄။ ဒို့ခေတ်ဆေးဆိုင်(မန္တလေး) …. ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်နှစ်သောင်း)
(ကိုမျိုးသူဟန်+မ၀င်းဖြူဖြူထွေး- သမီး မဖြူစင်ဟန်)
၆၅။ ၀င်းဝင်း(မန္တလေးဂေဇက်) …. ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သုံးသောင်း)
၆၆။ မCrystalline …. ၂၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်းငါးထောင်)
၂၅-၆-၂၀၁၂ နေ့တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ … ၇၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ခုနှစ်သောင်းငါးထောင် တိတိ)
၂၅-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း .. ၃၁၉၅၃၀၀ ကျပ် ( ကျပ် သုံးဆယ့် တစ်သိန်း ကိုးသောင်း ငါးထောင့် သုံးရာကျပ်တိတိ)
၂၆-၆-၂၀၁၂ ၆၇။ ပင်လယ်ပျော် နဲ့ မခိုင်ခိုင် ဇနီးမောင်နှံ …. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၆၈။ ကိုgipsy …. ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
၂၆-၆-၂၀၁၂ တွင်ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်းတိတိ)ည ၈း၄၅ နာရီ
၂၇-၆-၂၀၁၂ ၆၉။ကိုနိုင်ဝင်းအောင် ..၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၇၀။ကိုသူရဇော် .. ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၇၁။မတင်ဇာချိုနှင့်ညီအမများ….. ..၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တသောင်း)
၇၂။မခိုင်မာလှိုင် .. ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၇၃။ကိုဇောက်ထိုး .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်ငါးသောင်း)
၂၇-၆-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ …၈၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ရှစ်သောင်း )
၂၇-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၃၀၅၃၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်သုံးသိန်း ငါးထောင့် သုံးရာကျပ်တိတိ)
၇၄။-ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ကြည် .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း)
၇၅။ကိုပိုင်လေး .. ၆၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် ခြောက်ထောင်)
၇၆။ မရို့စ်မင်း .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၇၇။ ကိုတင့်ထွန်းလင်း နှင့်မစန္ဒာမင်းအောင် .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၇၈။ ရွာသားတစ်ဦး .. ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
၂၉-၆-၂၀၁၂ ကောက်ခံရရှိငွေ … ၉၆၀၀၀ ကျပ် (ကိုးသောင်းခြောက်ထောင် ကျပ် တိတိ)
၂၉-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၄၀၁၃၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်လေးသိန်း နှင့် တစ်ထောင့် သုံးရာကျပ်တိတိ)
၃၀-၆-၂၀၁၂ ၇၉။ မနိုဗီ .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း )
၈၀။ ကိုAKKO + မetone .. ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၁။ မ hnin phyu (မန္တလေး) .. ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၈၂။ မ pan pan .. ၁၀၅၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်းငါးရာ)
၈၃။ ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်ကြည်လေး .. ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင်)
၈၄။ ကိုအောင်ခိုင်ဖြိုး+မလွင်လွင်အောင်.. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၃၀-၆-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၁၆၅၅၀၀ (ကျပ် တစ်သိန်း ခြောက်သောင်း ငါးထောင့် ငါးရာ ကျပ် တိတိ)
၃၀-၆-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၅၆၆၈၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်ငါးသိန်း နှင့်ခြောက်သောင်း ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)
၈၅။ ဘဘဘလက်ချော … ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၆။ ကိုအမတ်မင်း … ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၇။ အုပ်ထိန်းသူ … ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၈၈။ ကို အညာတမာနှင့် အိပု . ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၈၉။ ကိုမင်းဇော် … ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၁-၇-၂၀၁၂ နေ့လည် ၃း၃၀ ထိ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သိန်း တိတိ)
၁-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၇၆၆၈၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်ခုနှစ်သိန်း နှင့်ခြောက်သောင်း ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)
၉၀။ ထားဝယ်သား .. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၉၁။ ကိုရင်မောင်+ မမယ်မ .. ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၂-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၄၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် လေးသောင်း)
၂-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၈၀၆၈၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်ရှစ်သိန်း နှင့် ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)
၄-၇-၂၀၁၂ ၉၂။ အာဂ နှင့် နွယ်ပင် … ၁၅၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်းငါးထောင်)
၉၃။ စုံစုံ … ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၉၄။ ကိုပေါက် … ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၄-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၃၅၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် သုံးသောင်းငါးထောင်)
၄-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၈၄၁၈၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်ရှစ်သိန်း နှင့် လေးသောင်း တစ်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)
၉၅။ ကိုကြောင်ကြီး ……. .၄၅၀၀၀ ကျပ် (လေးသောင်းငါးထောင် ကျပ်)
၉၆။ ချစ်ရင်ထူးနှစ်……… ၂၀၀၀၀ ကျပ် (နှစ်သောင်းကျပ် )
၆-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ .. ၆၅၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် ခြောက်သောင်းငါးထောင်)
၆-၇-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း … ၃၉၀၆၈၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်ကိုးသိန်း နှင့် ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)
၉၇။ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦး …. ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၇-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ … ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သောင်း)
၇-၇-၂၀၁၂ ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း ၃၉၁၆၈၀၀ (ကျပ် သုံးဆယ့်ကိုးသိန်း တစ်သောင်း ခြောက်ထောင် နှင့် ရှစ်ရာ တိတိ)
၉၈။ ကိုရဲစည် … ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၉၉။ Infra -SMD … ၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသောင်း)
၁၀၀။ ဒေါ်ကျင်စု မိသားစု … ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၁၀၁။ ဘုရင့်နောင် စုပေါင်း ဒါန အဖွဲ့ … ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၁၀၂။ ဦးအေး -ဒေါ်ကျင်သန်း မိသားစု … ၅၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် ငါးသောင်း)
၁၀၃။ ကို အရင့်ရောင် … ၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးထောင် )
၁၀၄။ မမေဂျူလိုင် … ၁၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သောင်း )
၈-၇-၂၀၁၂ တွင် ကောက်ခံရရှိငွေ … ၃၄၅၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သုံးသိန်း လေးသောင်းငါးထောင်ကျပ် )
၈-၇-၂၀၁၂ ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း .. ၄၂၆၁၈၀၀ (ကျပ် လေးဆယ့် နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း တစ်ထောင့် ရှစ်ရာကျပ်တိတိ)
ပါဝင်လှုဒါန်းလိုသူများ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များ သို့ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန် .. ကိုရွှေတိုက်စိုး .. ၀၉ ၄၉၃၀ ၃၀၄၅
ကိုအမတ်မင်း .. ၀၉ ၄၂၁၁၁ ၈၆၈၅
မန္တလေး .. (လေးပေါက်) ကိုပေါက် .. 09-680-5396
နေပြည်တော်… ရွာစားကျော် ၀၉ ၄၃၀ ၁၇၀ ၆၉
ရန်ကုန် တွင် အန်တီပဒုမ္မာ ၊ အန်တီမမ၊ ဆူး ၊ etone သို့လည်း ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ကောက်ခံမည့် ရက်အား မှုလပထမက ၃၀-၆-၂၀၁၂ သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း သွားရောက်လှုဒါန်းမည့် ရက်မှာ ၈-၇-၂၀၁၂ ဖြစ်သောကြောင့် လူဒါန်းလိုသူများ ၄င်းရက်မတိုင်မီဆက်သွယ်လူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် မန္တလေးမှ လေးပေါက် နှင့် ကိုရွာစားကျော်တို့မှာမူ ရန်ကုန်သို့ ငွေပြန်လွှဲရန် လိုအပ်ပါသောကြောင့် ၃-၇-၂၀၁၂ နောက်ဆုံးထား ထည့်ဝင်ပေးပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
သွားရောက်လှုဒါန်းမည့် ၇က်စွဲ ဇွန်လိုင်လ ၈ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ နံနက် ၁၀နာရီ့ 
သွားရောက်လှုဒါန်းမည့် နေရာ ။ ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)
အမှတ် (၄၈၁) ဒုထပ် -ကျိုက္ကဆံလမ်း
တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြိုနယ် .
ဖုံး . ၀၁-၄၃၀၁၇၂
e-mail : rta.program@gmail.com
Foreign Resident says: လှူဒါန်းချင်နေတဲ့ အလှူတစ်ခု အောင်မြင် သွားတဲ့အတွက်
ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာစွာ သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ပါတယ်ဗျာ ။
အလှူ အောင်မြင် အောင် ဦးဆောင်ပေးခဲ့သူတွေရဲ့ စေတနာနှင့် အနစ်နာခံမှုတွေကို
လှိုက်လှိုက် လဲလဲ ( လှိုက်လှိုက် လဲလဲ ) အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် အဘ က ၅ သိန်း စတည်ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောလိုက်ချိန်မှာ ၊
( အဘ အနေ နှင့် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ဖို့က အခြေအနေ မပေးဘူးလေ )
ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ် Identity Reveal ဖြစ်ရမှာမို့လို့ မဝံမရဲ ဖြစ်သော်ညားလည်း ၊
ငါတို့ လုပ်ရတော့မယ် ၊ လုပ်သင့်နေပြီ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နှင့် ၊
ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှေ့ကို ခြေလှမ်းတိုးထွက်ပြီး စတင် ဦးဆောင် နှိုးဆော်ပေးခဲ့တဲ့ ၊
ကို htoosan ကို ၊ အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ။
ရွာသူား အားလုံးရဲ့ စေတနာ နှင့် စိတ်ဓါတ် ကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ ။
အရီးခင်လတ် says: ကထူးဆန်း ဆိုတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း လေးလုပ်ရမှာပေါ့။ ;-)
စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးသူ အားလုံး နဲ့ သွားရောက်လှူဒါန်းသူများ အားလုံးကို ကျေး ဇူးပါရှင်။:-)
Comments By Postတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - ခင် ခ - Ei Kyipyarရထား ထွက်တော့ မယ် - ခင် ခ - ကြည်ဆောင်းအတ္တဆန် - Ei Kyipyar - ကြောင်ဝတုတ်အဟံ ပထမံ - အလင်း ဆက် - ဦးဦးပါလေရာနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ko pauk mandalay - ကြည်ဆောင်းသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်အဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - အရီးခင်လတ် - TheWinner GetprizeCongress - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်ကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဦးဦးပါလေရာ - ဆူးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - ကြောင်ဝတုတ် - awra-choTeach Your Toddlers with These Best Free Learning Android Apps - awra-choပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - Ma Ei - ခင် ခအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ဖော့(စ)ထရော့ချာလီ - kyeemiteမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - Admin Kai - GaviaGirlကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - awra-cho - chitသို့ ချစ်သောဖေဖေ - kyeemite - Myo Thantဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - kyeemite - လူကလေးရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Ei Kyipyar - Yin Nyine Nwayမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - panpan - ဦးကြောင်ကြီးဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - awra-cho - Kaung Kin Pyarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - သူကလေး - သူကလေးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - kyeemite - ဆူးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - kyeemite - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - သူကလေး - ခင် ခကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ခင် ခ - kyeemiteငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - အလင်း ဆက်ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - kyeemite - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - TNA``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - TheWinner GetprizeEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77850 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58609 Kyats )MaMa (57779 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...